South African Airways: Duulimaadyada ka imanaya Johannesburg kuna socda Mauritius
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » South African Airways: Duulimaadyada ka imanaya Johannesburg kuna socda Mauritius
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Mauritius • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
South African Airways: Ka duusho Johannesburg kuna sii jeeda Mauritius
SAA waxay hadda ku dhowdahay bishii ugu horreysay ee hawlgalkeeda iyada oo duulimaadyo maxalli ah laga bilaabo Johannesburg ilaa Cape Town iyo gobol ahaan Accra, Kinshasa, Harare iyo Lusaka. Adeegga maalinlaha ah ee Maputo wuxuu bilaabmaa Diseembar 2021.
Mauritius waxay xiriir adag la leedahay Koonfur Afrika oo labaduba waa dalxiis caan ah iyo goob ganacsi.
Istaraatiijiyada waddada SAA ayaa si joogto ah loola socdaa loona qiimeeyaa iyada oo la raacayo istaraatijiyadda samatabbixinta ee ganacsadaha dabadii ee joogtaynta iyo macaashka.
SAA waxay ku faraxsan tahay inay dib u bilowdo adeegyadii Mauritius, oo waagii hore caan iyo macaashba lahaa.
South African Airways (SAA) waxay sii wadaysaa dib -u -dhiska shabakadeeda iyadoo dib loo bilaabay adeegga Mauritius laga bilaabo Noofambar 21 -keeda, 2021. Duulimaadyadu waxay marka hore shaqeyn doonaan laba jeer toddobaadkii Arbacada iyo Axadaha, iyagoo ka baxaya Johannesburg AMA Tambo International (ORTIA) markay tahay 09:45 subaxnimo iyadoo duulimaadyada soo laabanaya ay ka tagayaan Mauritius markay tahay 04:35 pm.
South African Airways Maamulaha Ku -meelgaarka ah Thomas Kgokolo ayaa leh, “Qayb ka mid ah istaraatiijiyadeena kobcinta ayaa ah in la aqoonsado waddooyinka ay baahidu ka jirto oo faa’ido u yeelan kara sidaha. Dib -u -bilaabista adeegyada Mauritius waxay buuxisay labadaas shuruudood. Intaa waxaa sii dheer, waddanku wuxuu xiriir adag la leeyahay Koonfur Afrika oo labaduba waa dalxiis caan ah iyo goob ganacsi. Waxaan ku kalsoonahay in tigidhka qaadashadu uu xoog yeelan doono, gaar ahaan marka la gaaro xilliga xagaaga. ”
imanaysa wuxuu hadda ku soo dhowaanayaa bishii ugu horreysay ee hawlgalkeeda iyadoo duulimaadyada maxalliga ah ee Johannesburg ilaa Cape Town iyo gobol ahaan Accra, Kinshasa, Harare iyo Lusaka. Adeegga maalinlaha ah ee Maputo wuxuu bilaabmaa December 2021.
Kgokolo wuxuu leeyahay istaraatijiyadda waddada ayaa si joogto ah loola socdaa loona qiimeeyaa iyada oo la raacayo istaraatijiyadda samatabbixinta ganacsiga ee sii wadidda iyo ka-faa'iidaysiga.
"Tani waa dhaqan macquul ah oo ay qaateen shirkadaha duullimaadyada adduunka oo dhan marka la eego jawiga adag ee hawlgalka ee warshadaha ay ku jirto. Iyada oo ku xidhan qaadashada meelaha hadda la joogo iyo halka ay jirto baahida mustaqbalka, waxaan ku dari doonnaa oo kala goyn doonnaa waddooyinka."
Kgokolo ayaa leh imanaysa wuxuu ku faraxsan yahay inuu dib u bilaabo adeegyadii Mauritius, oo waagii hore caan iyo macaashba lahaa.
Waqtiga duulimaadka ee loo socdo iyo laga imanayo dalka waa qiyaastii afar saacadood.